अनेसास निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक , यस्तो छ निर्वाचनको नालिबेलि - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
असनेपालन्युज , अष्ट्रेलिया ।सन्जीव अर्याल । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज(अनेसास)को नयाँं कार्य समिति चयनका लागि गरिएको निर्वाचन को नतिजा वाहिर आएको छ । अध्यक्षमा प्रकाश पौडेल “माईला” निर्विरोध चयन हुनु भएको छ । यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा गोवर्धन पूजा, उपाध्यक्षहरूमा राजेन्द्र श्रेष्ठ (अमेरिका),राजेश बुढाथोकी (ओसेनिया)निर्विरोध , बाबा बस्नेत (एसिया)निर्विरोध , सुनिल संगम (युराेप) निर्विरोध रहेका छन्। यसरि नै महासचिवमा सर्वज्ञ वाग्ले , कोषाध्यक्षमा कृष्ण गिरी ( निर्विराेध),सचिवमा विमला निराैला, निर्वाचित बनेका छन्। यस्तै सदस्यहरूमा, ज दीप पाठक,तारा अधिकारी र रणुका बस्नेत,प्रमोद सारंग ,निजानन्द मल्ल निर्वाचित बनेका छन्।
निर्वाचन समितिले घोषणा गरे अनुसार अनेसासले ६ साताअघि तोकेको निर्वाचित समितिले विश्वभरका १ हजार २ सय बढी मतादाताहरूले दिएकाे मतका आधारमा नयाँ कार्यकारी समिति चयन गरेकाे जनाएको हो । समितिले अनेसासमा करिब २ हजार १ सय जना आजीवन सदस्य रहेकाे मतदाता नामावलिलाई वाहिर ल्याएको थियो ।
अध्यक्ष: प्रकाश पौडेल माईला
वरिष्ठ उपाध्यक्ष: गोबर्द्दन पुजा
उपाध्यक्षहरु : राजेन्द्र के श्रेष्ठ
महासचिव: सर्वज्ञ वाग्ले
सचिव: विमला निरौला
कोषाध्यक्ष: कृष्णकुमार गिरी
रेनुका (वस्नेत) थापा
मत कति !
समितिले भिडियो मार्फत सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार गोवर्धन पूजाले ७५५ मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका प्रतिद्वन्दी लालगोपाल सुवेदीले ३९७ मत प्राप्त गरेका छन् । महासचिव वाग्लेले ६६८ मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका निकटम प्रतिद्वन्दी स्पन्दन विनोदले ४ सय ५२ मत प्राप्त गरेका छन् ।सदस्यहरूमा सबैभन्दा बढी मत जापानका दीप पाठकले प्राप्त गरेका छन् । पाठकले ८२६ मत प्राप्त गरे । दोस्राे धेरै मत प्राप्त गर्नेहरूमा तारा अधिकारी र रणुका बस्नेत छन् । दुबैले ६२८ मत पाएका छन् । त्यसैगरी अर्का सदस्य प्रमोद सारंगले ५ सय ८८ मत प्राप्त गरे भने निजानन्द मल्लले ५७१ प्राप्त गरे ।
सचिवमा विमला निराैला र प्रेमप्रसाद भट्टराइबीच प्रतिस्पर्धा भएकाे थियाे । विमला निराैलाले प्रेमप्रसाद भट्टराईलाइ अत्यधिक मतले पराजित गरेकी हुन् । निराैलाले ७ सय ५७ मत प्राप्त गरिन् भने भट्टराइले ३ सय ४८ प्राप्त गरे ।
निर्वाचन समितीमा को को थिए
निर्वाचन अधिकृतहरू डा. चुडामणि खनाल, तीर्थराज पाण्डे, पुष्पा खनाल, विजयराज भट्टराई, कुमार सिम्खडाले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
निर्विरोधको प्रयास र सफलता
शुरुमा निर्विरोध समिति चयन गर्न कार्य समिति तथा शुभचिन्तकहरुले प्रयास गरेका थिए । यो महामारिको बेलामा निर्वाचन नहोस् भनेर विभिन्न पदाधिकारिहरुले विभिन्न प्रयास थालेका थिए । यसैक्रममा केहिले आ-आफ्नो उम्वेद्वारि नदिएका वा फिर्ता लिएका करण केहि पदमा भिडन्त र वैमनष्यता विनानै निर्वोरोध पदाधिकारिहरु चयन बनेका हुन्। शुरुमा निवर्तमान उपाध्यक्ष आचार्य राजन शर्मा (भीमसेन सापकोटा ) लाई अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव आएको र त्यसै अनुसार तयारि गरिएको भएपनि निर्वाचन गर्नु नपरोस् भन्ने उदारताको सहमति अनुसार उहांले आफ्नो उम्वेद्वारि दर्ता नगरउंनु भए पछि अध्यक्ष पद निर्विरोध हुन पुगेको हो । यस्तै कोषाध्यक्ष तथा अन्य केहि पदहरु छलफलकै क्रममा निर्विरोध हुन पुगेको बताईन्छ ।
असन्तुष्टि र निर्वाचनको अपारदर्शिता
यसैविच केहि पदाधिकारिहरुले निर्वाचन प्रयोगका लागि संकलन गरिएका गोप्य तथ्याङ्कको चुहावट र दुरुपयोग भयो भन्ने आरोप लगाएका छन्। महासचिव पदका उम्वेद्वार विनोद स्पन्दनले आफ्नो नामनै राम्रो सँग उल्लेख नभएको र अनियमितता हुनगएको भन्दै युरोप च्याप्टर विघठन भएको कुरा सामाजिक सन्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। यस्तै अग्रजहरुको भूमिका प्रति अस्नतुष्टि देखाउंदै निवर्तमान पदाधिकारिहरु शान्तिराम ढकाल , गणेश घिमिरे, सानु घिमिरे लगायतले निर्वाचन वहिष्कार गरेको सामाजिक सन्जालमा वाहिर ल्याएका थिए ।
यस बिषयमा निर्वाचन समितिका प्रमुख चुडामणि भट्टराईले प्राविधिक रुपमा कुनै त्रुटी हुन नगएको र हुने सम्मकै राम्रो अत्याधुनिक प्रविधि अपनाएको तर “ईमेल” सम्प्रेषण गर्दा त्रुटी नभएको बरु आजीवन सदस्यहरुको “जन्क ” र ” ‘प्रमोशन ” मा सन्देश अड्किएको हुन सक्ने बताउंनु भएको छ ।उहांले आवश्यक पर्दा सबै प्रमाण हरु पेश गर्न आफु तयार रहेको बताउंनु भयो । यस्तै असन्तुष्टि आवाजलाई आफुहरुले सम्वोधन गर्दै सुधारको बाटोमा अघि बढ्ने निर्वाचित पदा धिकारिहरु प्रकाश माईला लगायत ले बताएका छन्। ” हामि सबै पक्षको अनुभवलाई सम्मान गर्दै हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने छौं ” वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयि बनेका गोवर्द्दन पूजाले असनेपालन्युजलाई बताए ।
बहुसन्ख्यक आजीवनसदस्यहरु मतदान बाट बन्चित भएको र यो नियोजित षड्यन्त्र तथा अनियमितताको प्रष्ट संकेत हो भन्दै अनेसास डि सि का पूर्व अध्यक्ष राम प्रसाद खनाल लगायतले सामाजिक सन्जाल मार्फत वाहिर ल्याउंनु भएको थियो । महासचिव पदमा विजयि बन्नु भएका सर्वज्ञ वाग्ले यस विषयमा आफुहरुले जिम्वेवारि सम्हाल्नासाथ छानविनमा पहल गर्ने बताउंनु हुन्छ ।
अन्यदेशमा झैं अष्ट्रेलिया ओसिनिया बाट पनि उपाध्यक्ष्य पदमा राजेश बुढाथोकि निर्वोरोध हुनुभएको छ । अष्ट्रेलियामा अनेसासको स्थापनाकाल देखि नै निर्विरोध पदाधिकारी चुनिने क्रम अहिले पनि निरन्तर बनेकोले यसमा सबै सदस्य र अगुवाहरुप्रति आफु आभारि बनेको उपाध्यक्ष बुढाथोकि बताउंनु हुन्छ । शुरुवातमा सन् २०११ देखि अनेसासको अष्ट्रेलियामा संस्थागत पुनर्विस्तार भएको हो । यस अघि अनेसास अष्ट्रेलियाका संस्थापक तथा न्यु साउथ वेल्सका अध्यक्ष भीमसेन सापकोटा(आचार्य राजन शर्मा) ४ कार्यकाल सम्म निर्विरोध केन्द्रीय उपाध्यक्षमा चयन हुनुभएको थियो। निवर्तमान कार्यकालमा महासचिव पदमा अष्ट्रेलिया बाटै गणेश घिमिरे र सदष्य पदमा सानु घिमिरे निर्वाचित हुनु भएको थियो । यसअघि केन्द्रीय कार्य समितिमा अष्ट्रेलियाबाट ३ जना नै कार्य समितिमा हुनुहुन्थ्यो भने यसपालि मात्र १ जनाको यो क्षेत्र बाट प्रतिनिधित्व हुन पुगेको छ ।अष्ट्रेलियामा दीपक विष्टले शुरुवातको चरणमा एडेलेडमा प्रथम च्याप्टरको स्थापना गर्नु भएको थियो तर पछि यो निस्कृय हुन पुगेको थियो ।हाल अष्ट्रेलियाको क्यानवेरा , न्युसाउथ वेल्स ,ब्रिसवेन , पर्थ लगायतका राज्यमा अनेसास च्याप्टरहरु विस्तारित छन्।
युटुबबाट नतिजा घोषणा र अनेसासका कार्यक्रमका केहि झलकहरु :